Safiirka dalka Imaaraatka Carabta ee Somaliya ufadhiya oo la kulmay James Swan. – Kismaayo24 News Agency
Safiirka dalka Imaaraatka Carabta ee Somaliya ufadhiya oo la kulmay James Swan.
by admin 31st December 2019 0156
Safiirka Imaaraadka Carabta u qaabilsan Soomaaliya Maxamed Axmed Cusmaan oo todobaadyadii la soo dhaafay ku sugnaa Muqdisho ayaa maanta Xarunta Safaaradda ee Muqdisho kula kulmay Safiirka Qaramada Midoobey ee Soomaaliya James Swan.
Qoraal kooban iyo sawirro lagu daabacay barta Twitterka ee Safaaradda Imaaraadka Carabta ee Muqdisho ayaa lagu shaaciyay kulankan, inkastoo aan tafaasiil dheeraad ah laga bixin.
Saameynta Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya ayaa hops u dhac ku yimid tan iyo wixii ka dambeeyay markii dowladda Soomaaliya ay xayirtay diyaarad laga lahaa Imaaraadka Carabta, isla markaana waday lacqg gaareysa illaa 10 milyan oo dollar, lana wareegtay dowladda Soomaaliya.
Tallaabadaas ayaa ka careysiisay Imaaraadka Carabta kuma tilmaamtay in dowladda Soomaaliya ku xadgudubtay diblomaasiyadda, iyadoo ka dalbatay raalli gelin cad ah inay ka bixiso dowladda Soomaaliya ficilkaas.
Ra’isul Wasaare Kheyre iyo Sheekh Shaakir oo kulan xasaasi ah leh